Swan oo wadahadal la yeeshay Axmed Madoobe | KEYDMEDIA ONLINE
Swan oo wadahadal la yeeshay Axmed Madoobe
Safarka Swan waxuu qeyb ka yahay booqasho uu ku maraya Maamul Goboleedyada dalka.
KISMAAYO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa Maanta xafiiskiisa ku qaabiley Wafdi ka socda QM oo uu hogaaminayo James Swan, oo socdaal maalmahan ku maraya Maamul Goboleedyada dalka.
Arrimaha looga hadlay Kulanka Swan iyo Axmed Madoobe waxaa kamid ah taageeradda QM ee Jubbaland 2021 iyo horumarka dhinac siyaasadda, iyadoo ay isla soo qaadeen Shirka la filayo inuu ka furmo Dhuusamareeb 1-da Febuary.
Swan wuxuu uga mahadceliyay Axmed Madoobe aqbalaadda waan-waanta Beesha Caalamka ee xalka loogu raadinayo khilaafka doorashadda, kadib markii Jubbaland iyo Puntland dhawaan soo magacaabeen xubnaha gudiga doorashadda.
UNSOM oo la aas-aasay dowladdii Xasan Sheekh ayaa ka caawisa Maamul Goboleedyadda iyo dowladda Dhexe dhinacyadda siyaasadda, bini'aadanimada iyo amniga, iyagoo caawiya howlgalka AMISOM.